Home Wararka Maxaa laga filan karaa kulanka Rooble & beesha Hiraab ee berito?
Maxaa laga filan karaa kulanka Rooble & beesha Hiraab ee berito?
Waxa lagu wadoaa in berito uu ka dhaco magalaada Muqdisho kulan gaar ah oo dhexmari doona odoyaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada ka soo jeedo beesha Hiraab.
Kulankaab ayaa looga arinsan doonaa xaalada amni iyo siyaasadeed ee dalka ku jiro. Waxa sidoo kale la iska wareeysa doonaa talooyin la xiriira sidii loo soo af jaro lahaa khilaafka Rooble iyo Farmaajo.
Beesha Hiraab ayaa la filayaa in ay si buuxda u garab istaagto RW Rooble, iyaga oo u muujin doona inay taageersan yihiin siyaassdiisa iyo Da’daalada uu kawado dalka.
Farmaajo ayaa Dhaqaale ku bixiyay in uu adeegsado qaar kamida beesha Hiraab oo uu hogaaminayo Maxamed Geedi iyo Madaxweynihii hore Shiikh shariff Sh Axmad si ay uga horyimaadaan qorshaha RW Rooble. Beesha Abgaal ayaa si buuxda u garab istaagtay RW Rooble.
Dhanka kale MW hore Shiikh Sherif ayaa heshiis hoose la galay MW Farmaajo iyo Fahad Yaasiin kuwaas oo u balan qaaday in uu u noqon doono qorshaha labaaad (plan B) hadii ay ku fashilmaan Doorashada soo socota.